ကားရောင်းချင် ၀ယ်ချင်သူများအတွက် လတ်တလော အချိန်နှင့် တပြေးညီ ကားနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများရောင်းကား၊ ၀ယ်ကားသတင်းများကို mmcarmart ၏ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းမှ အခမဲ့ ၀န်ဆောင်ပေးနေပါသည်။
www.mmcarmart.com မှတဆင့် သင်၏ ကားကြော်ငြာသည် ရန်ကုန်တစ်မြို့တည်းတွင်သာမက မြန်မာတပြည်လုံးရှိ ကားရောင်းချင် ၀ယ်ချင်သူတို့ထံအထိ ပြန့်နှံ့သွားစေနိုင်သော အထိရောက်ဆုံး ကြော်ငြာအားရှိခြင်း။
ကားဝယ်ချင်သူများနှင့် ရောင်းသူများ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံနိုင်မည့် တစ်ခုတည်းသောနေရာ
Buy | Sell or Rent cars | Remember mmcarmart
ကားဝယ်ချင်သူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် (ကြည့်) ရမည့် ကားဈေးနှုန်း သတင်းနှင့်အတူ နောက်ဆုံး ပြောင်းလဲ တိုးတက်၊ တင်သွင်းလာသော ကားသစ် Model မြင့်များ (တရားဝင် Showroom များ) မှ မူရင်းရောင်းဈေးအတိုင်း ကြော်ငြာပေးထားသဖြင့် "သင်" ထိုင်ရာမှ မထဘဲ လိုချင်သည့် ကားအား www.mmcarmart.com သို့ ၀င်ရောက်၍ ရောင်းကားများ၏ ဓါတ်ပုံ၊ ကားအတွင်းအပြင် အခြေအနေနှင့် ဈေးနှုန်းများအား စိတ်အေးချမ်းသာစွာ လေ့လာဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၀ယ်လိုရောင်းလိုသူများအနေနှင့် ဤအချက်အလက်များဖြင့် www.mmcarmart.com တွင် အခမဲ့ ကြော်ငြာနိုင်ပါသည်။
ရောင်းရန်၊ ၀ယ်ရန် ကားအမျိုးအစားရွေးရန် (Car Type) Sedan, Hatchback, Sports, SUV (Sport Utilities Vehicle), MPV (Multipurpose Vehicle), Truck, Bus စသည်ဖြင့်
ထုတ်လုပ်သည့် ခုနှစ်၊ Model
ရောင်းဈေး၊ ၀ယ်ယူလိုသည့် ခန့်မှန်းတန်ဖိုး
ရောင်းသူ၊ ၀ယ်သူ၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်။
mmcarmart မှ online advertising ကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်ပေးရန် 09 73 232 696 ကိုသာ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
mmCarMart is the number one car classifieds for buying vehicles like sports car, hybrid car, COE cars, OPC Car, hatchback, stationwagon, MPV, SUV, van, truck & parallel imported cars. Buy from new car dealer, parallel importer, car auction, etc. Also find useful products & services like car audio, car polishing, solar film, car accessories, car parts, car repair, car workshop, car bodykit, car tyre, sport rims, car mat, car stickers, social media marketing, car rental, car blog, lorry rental, van rental, bus rental, mover, motor insurance, commercial vehicle leasing & truck rental.